बच्चाहरू AKA साना मानवलाई टेक्नोलोजी प्रस्तुत गर्दै - आईफोन
आईफोन auto अटो बन्द
गर्भवती हुँदा गर्भपतन को बारे मा सपना
iphone 6s प्लस ब्याट्री मुद्दाहरु
उनीहरु एक अमेरिकी नागरिकलाई देश निकाला गर्न सक्छन्
बच्चाहरू AKA साना मानवलाई टेक्नोलोजी प्रस्तुत गर्दै
आजकल हाम्रो बच्चाहरूको जीवनमा टेक्नोलोजी यति प्रबल छ कि बच्चाहरूको लागि डिजाइन गरिएका खेलौनाहरूमा स्मार्ट टेक्नोलोजी पनि पर्छ। त्यहाँ बच्चाहरूको लागि एक खेलौना छ जुन उनीहरूलाई कोडि! सिकाउँदछ! जब म बारेमा कुरा गर्छु बच्चाहरूलाई प्रविधि परिचय गर्दै , मेरो मतलब ट्याब्लेटहरू, ट्याब्लेट जस्तो उपकरणहरू, आईपडहरू, आईफोनहरू, एमपी3प्लेयरहरू, र धेरै धेरै कुनै पनि उपकरण टच स्क्रिनको साथ।
किन यो महत्वपूर्ण छ?
बच्चाहरूलाई प्रविधि प्रस्तुत गर्दै महत्त्वपूर्ण छ किनभने उनीहरूले यसलाई धेरै कलिलो उमेरदेखि नै प्रयोग गर्दैछन् र यसलाई झट्टै यसको सामु उजागर गरिनेछ। मेरो कान्छी नौ महिना पुरानो छ, र उनलाई पहिले नै थाहा छ कि आमाको फोन उनीसंग रहेको कुनै खेलौना भन्दा कूलर छ। मैले उनीसँग एउटा खेलौना स्मार्टफोन अनुकरण पनि पाइन जुन उनले दस-खुट्टा पोलमा छुने छैन।
केही स्कूलहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्दछ बालवाडी र पहिलो कक्षामा ट्याब्लेटहरू , त्यसैले ट्याब्लेट प्रयोगको बुझाइ बच्चाहरूको लागि एक राम्रो विचार हो। साथै, प्रविधि धेरै शिक्षित हुन सक्छ! किंडरगार्टनमा मेरी छोरीले कम्प्युटर प्रयोगको लागि स्कूलमा आफ्नै हेडफोनहरू पठाउनुपरेको थियो र दस वर्ष पहिले मेरो सबैभन्दा जेठो बालवाडीमा हुँदा यो खासै केही भएको थिएन।
बच्चाहरूलाई पोर्टेबल Noisemakers दिन सुरु गर्न जब
खैर, लगभग हरेक खेलौना आजकल एक पोर्टेबल शोर निर्माता हो, तर मेरो मतलब स्मार्ट टेक्नोलोजी हो। म सँधै सानो बच्चाको बखत सुरू गर्दछु, जब तिनीहरू कुरा गर्न पर्याप्त उमेर पुगेका छन् र राम्रो मोटर सीपहरू छन्। यो मैले योजना गरेको कुरा थिएन। यो ज्यादातर यो हो किनकि परिवारमा सबैजनालाई हेरेदेखि यो पहिल्यै प्रकट भइसकेको थियो, त्यसैले मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै उपकरणहरू पाएँ।
मेरो सिफारिश को लागी तिनीहरूलाई किन्न को लागी वा शुरू गर्न ह्यान्ड-म-डाउन उपकरणहरु छ। यस तरिकाले, लागत धेरै लगानी गरिने छैन किनभने दुर्घटनाहरू हुनेछ जब हुन्छ बच्चाहरूलाई प्रविधि परिचय गर्दै । मैले किनेको पहिलो आईपड ईबेमा $ for० को लागि प्रयोग गरिएको थियो, र यो जेलब्रोकन आइपुग्यो। मैले यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्‍यो, त्यसैले म आईओएस अपग्रेड गर्न सक्थें र त्यो कुराले चाट्यो! मेरी छोरीले यसलाई पानीको कूलरमा डुबाइदिए, र मैले सोचे कि यो गन्नर थियो। मैले यसलाई सुकाउने प्रयास गरें र यसलाई दुई हप्तासम्म बस्न दिनुहोस्, र यो चमत्कारी ढंगमा फर्कियो। मेरी छोरी पनि ड्रप र यो एक लाख पटक फेंक।
र, के तपाईंलाई थाहा छ त्यो an पुरानो आईफोन आइपड हुन सक्छ एक पल मा उपकरण? त्यसोभए यदि तपाईंले आफ्नो आईफोन अपग्रेड गर्नुभयो, तर पुरानो, सशुल्क-अफ यन्त्रको स्वामित्व पाउनुभयो भने, बच्चाहरूलाई दिनुहोस्! तपाईले गर्नु पर्ने भनेको भनेको यसमा सिम कार्डको साथ उपकरण सक्रिय गर्नु हो, र सक्रिय द्वारा, मेरो मतलब यसलाई सेटअप गर्नु हो, यसलाई सेल फोन योजना नदिनु हो। तपाईं कुनै पनि सिम कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन यस प्रक्रियाको लागि उपयुक्त छ, र तपाईंले भर्खर सक्रियता स्क्रिनबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ। एक पटक त्यो सकिएपछि, सिम कार्ड र voila हटाउनुहोस्! तत्काल आईपड!
कुन उपकरण प्रयोग गर्ने?
त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन विशेष रूपमा बच्चाहरूको लागि तयार पारिएको छ, जस्तै LeapPad र VTech, जसमा उत्कृष्ट सुविधाहरू छन् र बच्चाहरूलाई शैक्षिक खेलहरू सिकाउँदछन्। तर तिनीहरूको एक त्रुटि छ जुन मेरो लागि प्रमुख छ: तिनीहरू धेरै खेलका साथ आउँदैनन्, हुनसक्छ एक वा दुई कुनै, र थप खेलहरूको लागत १$ देखि २० डलर हो। यद्यपि उपकरण सुरुमा सस्तो हुन सक्छ, तपाईं खेलहरूको लागि भुक्तानी समाप्त। उपलब्ध खेलहरूको अभावले बच्चाहरूले तिनीहरूलाई छिटो बढाउने र उनीहरूसँग चाँडो थाक्ने पनि हुन्छ।
म आईप्याड, आईपड, वा ह्यान्ड-म-डाउन आईफोनहरू, र किन्डल फायर बच्चाहरू प्याकेज जस्ता एप्पल उपकरणहरू सिफारिस गर्दछु। सुरुमा यो अझ महँगो हुन सक्छ, तर तिनीहरूसँग TONS निःशुल्क खेलहरू र अनुप्रयोगहरू छन्। सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो बढ्नु बच्चा संग । जब बच्चाहरूले एक खेल वा अर्को खेल्छन्, तपाईं सजिलैसँग कम खर्चमा अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरा बच्चाहरूका लागि केहि गुणस्तरीय अनुप्रयोगहरूको लागि विगत पाँच वर्षमा अनुप्रयोगहरूमा कूल $ २० खर्च गरेको छु।
एप्पल वा किन्डलको लागि अनुप्रयोगहरू खरीद गर्ने बारेमा अर्को कुरा यो हो कि एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई खरीद गर्नुभयो, तपाईं तिनीहरूको स्वामित्वमा हुनुहुन्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई भविष्यका उपकरणहरूमा पनि स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग आईफोन have छ जसलाई नयाँ ब्याट्री चाहिन्छ, जुन म नयाँ उपकरणको लागत भन्दा कममा बदल्न सक्दछु, र जब म तयार हुन्छु म मेरो कान्छोलाई दिनेछु। यसको लागि भुक्तान गरिएको छ, यसको उपयोगी जीवन थियो, र मसँग पहिले नै खरिद गरिएका अनुप्रयोगहरू डाउनलोड हुन पर्खिरहेका छन्।
उमेर उपयुक्त अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहोस् ... बच्चाका लागि ड्युटीको कल छैन, कृपया।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बच्चाहरूलाई प्रविधि परिचय गर्दै यो उमेर उपयुक्त राख्नको लागि हो! तपाईं अनुप्रयोगहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको बच्चाको उमेर समूहका लागि डाउनलोड र खेल को लागी उपयुक्त हुन। कुनै पनि उमेर समूहको लागि एक टन नि: शुल्क वा कम लागत शैक्षिक अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन्। मसँग Pre-K को लागी एक अनुप्रयोग छ जुनसँग मसँग प्रेम / घृणाको सम्बन्ध छ। यस अनुप्रयोगले फेरि बारम्बार एबीसी गीत गाउँदछ, जुन मलाई मन पर्छ किनभने यसले घाँटी दुख्दैन (म जस्तो), र यसले मेरा बच्चाहरूलाई एबीसी पनि सिकाउँदछ। यो सीमित नि: शुल्क संस्करण छ, तर मैले खेलहरू अनलक गर्न paid १.99। भुक्तान गरें जसले पत्र मान्यता सिकाउन मद्दत गर्दछ। त्यसोभए म किन त्यसलाई घृणा गर्दछु? किनभने मैले बारम्बार दोहोर्याउँदा ABC गीत सुन्नु पर्छ!
तपाईलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ जब यो समय हुन्छ
अभिभावकको रूपमा तपाईलाई यो राम्रोसँग थाहा हुन्छ जब यो तपाईंको बच्चालाई टेक्नोलोजीमा परिचय गर्ने समय हो। मैले मेरा केही सुझावहरू साझेदारी गरेको छु जुन मलाई लाग्छ वास्तवमै ठूलो कामको लागि समयको लागि हो, र यसले मलाई मेरा बच्चाहरूसँग टेक्नोलोजी राख्न अनुमति दिन्छ। बच्चाहरूलाई प्रविधि प्रस्तुत गर्दै रमाईलो हुनुपर्छ र तपाइँका बच्चाहरूको लागि शैक्षिक, र सही यन्त्रहरूको साथ, तपाइँ प्रयोगको वर्षौं पाउनुहुनेछ।
मलाई भन, मेरी छोरीको आइपड भित्र आयो वास्तवमै उपयोगी ती लामो कार सवारी को समयमा!